विश्व Archives - Jhapa Times
अनौठो कुरा मुख्य विश्व
Post date २२ बैशाख २०७८, बुधबार १६:०४
No Comments on मालीकी २५ वर्षीया महिलाले एकै पटकमा ९ बच्चालाई जन्म दिइन्: आमा र बच्चाहरुकाे अवस्था स्थिर
एजेन्सी । अफ्रिकी मुलुक मालीकी एक महिलाले एकसाथ ९ बच्चालाई जन्म दिएकी छिन्‌ ।
२५ वर्षीया हालिमा सिसेले मोरक्कोको एक अस्पतालमा ती बच्चाहरूलाई जन्म दिएकी हुन्‌। नवजात शिशुमध्ये ५ छोरी र ४ छोरा छन्‌ ।
उनको गर्भमा धेरैवटा बच्चा रहेको र प्रश्रव हुन विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्ने थाहा भएपछि मालिका अन्तरिम राष्ट्रपतिले सरकारी कोषबाटै खर्च ब्यहोर्नेगरी सिसेलाई मोरक्कोको अस्पतालमा पठाएका थिए।
पहिले सिसेको गर्भभित्र ७ वटा बच्चा देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्‌। तर, मोरक्कोमा शल्यक्रिया गर्दा उनको पेटमा ९ वटा बच्चा रहेको पाइएको रोयटर्सले लेखेको छ।
अहिले आमा र सबै बच्चाको स्वास्थ्यावस्था स्थिर रहेको मालीको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ। चिकित्सकहरूले पनि यस्तो घटना दुर्लभ रहेको तथा आमा र सबै बच्चाहरूलाई बचाउनसक्नु निकै ठूलो उपलब्धि हुने बताएका छन्‌।
Post date २९ माघ २०७७, बिहीबार ०७:४८
No Comments on विश्वभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा १७ प्रतिशतले कमी
एजेन्सी । कोरोनाभाइरसबाट विश्वभरी सङ्क्रमित भएकाहरुको सङ्ख्यामा १७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो हप्ताको विवरणमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको देखिएको हो ।
पछिल्लो हप्तामा ३१ लाख नयाँ सङ्क्रमित भेटिएको डब्लूएचओले जनाएको विवरण सीएनएनले सार्वजनिक गरेको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो हप्ताको तुलनामा १७ प्रतिशत कम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
झण्डै १५ हप्ता अगाडि गत अक्टोबरपछिको सबैभन्दा कम सङ्क्रमित अहिले नै भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । अमेरिकी तथा युरोपेली मुलुकसँगै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्यामा कमी हुँदै गएको डब्लूएचओले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो एक हप्तामा विश्वभरी ८८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । यो सङ्ख्या पनि अघिल्लो हप्ताको तुलनामा १० प्रतिशत कम हो ।
Post date ४ माघ २०७७, आईतवार १०:२२
No Comments on भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान
एजेन्सी । भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियान सुरु भएको छ । शनिवार विहान साढे १० बजे भारतका प्रधानमन्त्रीले भिडियो शन्देशमार्फत अभियानको सुभारम्भ गरेका हुन् ।
अमेरिकी संसदमा ट्रम्प समर्थकको हमला, राजधानीमा कर्फ्यु
Post date २३ पुष २०७७, बिहीबार ०८:३६
No Comments on अमेरिकी संसदमा ट्रम्प समर्थकको हमला, राजधानीमा कर्फ्यु
एजेन्सी । राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम उल्टाउने ट्रम्पको प्रयासले अमेरिकामा हिंसा मच्चिएको छ ।
हिंसाको केन्द्र राजधानी बनेको छ भने गएराति ट्रम्प समर्थकले संसद् भवन (क्यापिटल भवन) मा हमला गरेका छन् ।
घटनामा गोली लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने राजधानी वाशिङ्टन डिसीमा कर्फ्यू लगाइएको छ ।
वाशिङ्टनस्थित संसद भवन (क्यापिटल बिल्डिङ)मा अमेरिकी कांग्रेसमा इलेक्टोरल कलेजलाई लिएर बहस चलिरहेको थियो । यही बहसपछि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडन विजयी भएको औपचारिक र कानुनी पुष्टि गर्ने कार्यक्रम थियो ।
यसैक्रममा हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सयौं समर्थकहरु भेला भएर प्रदर्शन सुरु गरे ।
प्रदर्शनकारी क्यापिटल बिल्डिङ भित्रै प्रवेश गरे र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव रद्द गर्न माग गर्न थाले । यसै क्रममा हिंसा सुरु भयो । प्रदर्शनकारीलाई रोक्ने प्रयासमा नेशनल गार्डस् एक्सनमा उत्रियो ।
क्यापिटल बिल्डिङमा प्रदर्शन गर्ने एक महिलालाई गोली लाग्यो । ती महिलाको अस्पतालमा मृत्यु भयो । उनको परिचय भने खुलेको छैन ।
अमेरिकामा भएको यो हिंसात्मक घटनाको चौतर्फी निन्दा भइरहेको छ ।
चुनावमा धाँधली भएको भन्दै ट्रम्पले विनाप्रमाण आफ्ना समर्थकलाई उक्साएको कारण हिंसा फैलिएकाले अमेरिकी लोकतन्त्र विश्वसामु लज्जित बनेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
ट्वीटरले ट्रम्पका ट्वीट र भिडियो सन्देशलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ ।
अनौठो कुरा जीवनशैली मुख्य राजनीति विश्व
Post date १७ पुष २०७७, शुक्रबार १०:०६
No Comments on रातभर पार्टी गरेर सुतेका सोभियत तानाशाह स्टालिन कहिल्यै उठेनन्
राशिफल : पाथीभरा माताको कृपाले २०७७ पौष १७ अर्थात ई.सं. २०२१ को पहिलो दिन (नयाँ बर्ष) शुक्रवार कस्तो रहला तपाईंको दिन ?
Post date १६ पुष २०७७, बिहीबार २३:२५
No Comments on राशिफल : पाथीभरा माताको कृपाले २०७७ पौष १७ अर्थात ई.सं. २०२१ को पहिलो दिन (नयाँ बर्ष) शुक्रवार कस्तो रहला तपाईंको दिन ?
मिति २०७७-९-१७ गते शुक्रबार तदनुसार ई.सं.२०२१-१-१, प्रमादी नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु,पौषकृष्णपक्ष द्वितीया तिथि ९:२२ बजेसम्म उप्रान्त तृतीया तिथि,तिष्य नक्षत्र, वैधृति योग, वणीज करण,चन्द्रमा कर्कट राशिमा। आजबाट २०२१ जनवरी प्रारम्भ।। तपाईंको दिन शुभ रहोस् ।
Post date १६ पुष २०७७, बिहीबार १२:४०
No Comments on यमनका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरू माथि गरिएको आक्रमणमा कम्तीमा २२ को मृत्यु
Tags बम बिस्फाेट